कांग्रेस सभापतिमा महामन्त्री शशांक कोइरालाको उम्मेदवारीको संकेत
भन्छन–‘पार्टीमा गुट अन्त्यको अभियान चलाउँछु’
प्रकासित मिति : २०७५ मंसिर १, शनिबार प्रकासित समय : ०९:४७
नवलपरासी । नेपाली कांग्रेसलाई गुट बिहिन पार्टी बनाउँनका लागि कोईराला परिवारबाट सभापति पदमा आफ्नो उम्मेदवारी हुने संकेत कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले गरेका छन ।
जिल्ला विकास योजनाको परिकल्पना दस्तावेज सार्वजनिक कार्यक्रमपछि पत्रकारहरुसँगको कुराकानीका क्रममा कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाले त्यस्तो संकेत गरेका हुन् ।
महामन्त्री कोइरालाले पार्टीलाई गुटैगुटले ध्वस्त बनाएको उल्ललेख गर्दै बलियो र एकताको भावदिने खालको नेपाली कांग्रेस बनाउनका लागि उदाहरण काम गर्ने बताए । उनले भने–‘अब पार्टीमा गुट उपगुटको अन्त्य हुनुपर्छ, म त्यसको उदाहरण बनेर देखाउँछु,, महाधिवेशनसम्म गुटको अन्त्य भने हुन सक्दैन। त्यसैले पार्टी सभापतिमा कोइराला परिवारबाट उम्मेदवारी हुन्छ ।’
उनले १४ औं महाधिवेशनपछि गुटको असर बाँकी नहुने भन्दै पार्टि सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारीबारे संकेत गर्दे भने–‘पार्टी सभापति पदमा यस पटक कोइराला परिवारबाट दाबी रहन्छ । पार्टीका सबै साथीहरुसँग छलफल गरेर मात्रै सभापति पदमा उठ्नेबारे निर्णय गछौं ।’
उनले कोइराला परिवारबाट सभापति पदको उम्मेदवार आफुनै हुने यसरी तर्क गरे–‘सभापतिको उम्मेदवारका लागि डा. शेखर कोइराला र सुजाता कोइरालासँग पनि छलफल हुन्छ । सुजाता कोइरालालाई स्वास्थ्यले साथ दिइरहेको छैन, डा. शेखर कोइरालासँग छलफल गरेर सभापति पदको निर्णय हुनेछ, अझै डेढ वर्ष समय भएकाले अहिलै हतारिने कुरा छैन ।’
उनले पार्टीभित्रको गुट उपगुटले पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने कार्य गरेकाले त्यसलाई रोकेर आफुले एकताको अभियान चलाउने बताए । उनले भने–‘अब ४० वर्षसम्मका युवालाई आकर्षित गर्न ठोस नीति बनाएर पार्टीलाई अघि बढाउनु पर्छ । मेरो ध्यान त्यत्तैतिर केन्द्रित भएको छ ।’